Yabela isikhafu amahle imfashini kungafaniswa nokuthutha izinaliti bese ukukhilosha. onobuhle ezahlukene izesekeli ezidingekayo sishaywe ngomgwaqo nakuzo nje ukuhlobisa ingubo kukhona omningi. Tie isikhafu - ngokushesha futhi kalula. Kuze kube yimanje, asikho isidingo sokuba umuntu omuhle at ukunitha, kunalokho, isikhafu ukunitha usizo craftswomen ongenakho okuhlangenwe nakho ukuba ukufunda amakhono abawadingayo ngilwazi ezihlukahlukene amaphethini - openwork nempumuzo. Ukwaluka scarves crocheted - okwakuvela ohlotsheni olukhethekile lwenkanyezi lokusungula enikeza amathuba cishe angenamkhawulo for nokucwaninga zokudala. Futhi-ke, kungenzeka hook ukudala izinto okukhethekile zithithibele kuphela kuye, ukuze kusetshenziswe at 100%.
Izindlela lapho scarves ukunitha ngixhumane ematfuba ku ukuhlola elikhanyayo zokudala ukudalwa into yobuciko, okuningi. Cabanga elula wabo, kokuba sebesazi ukuthi, ungakwazi enze eziyinkimbinkimbi umsebenzi fantasy.
Ukwaluka scarves crocheted kusukela ntambo izinsalela
1. Okokuqala ukuluka isikhafu kusukela segcekeni ngabanye anemibala wenza openwork iphethini. Izikwele ijezi njengoba bebizwa oxhumene a multi-anemibala, enezinto sifana web 2 kwesikwele futhi ububanzi 15 tikwele obuphelele (inani 30). isikwele Ngamunye usayizi mayelana 20x20 cm. Isikimu ukunitha openwork izikwele ingatholakala kalula nakuyi-Internet. Fit yiluphi uhlelo - I-zokudla kuhlanzekile yini, napkins, bedspreads. Obumbene uvolo ngemibala ezinhlanu, hhayi ngaphezulu. Ungathatha, isibonelo, omhlophe, omnyama, blue, ilambu elikuhlaza futhi grey; isibani obunsundu, beige ukukhanya, omnyama ngezitini ezibomvu. Izinketho lapha kungaba kakhulu. Nice ukuze uthole inhlanganisela njengoba imibala okungafani, kanye nemibala uhla close. Ekupheleni isikhafu ngempela ukuhlobisa emiphemeni eside ntambo emibalabala bahlangana shayela on imicu umbala ngamunye.
2. isikhafu Okwesibili uyophinde wemibhangqwana Motifs ngazinye njengoba izimbali ezincane ezimibalabala eqoqwe indwangu olulodwa. Lokhu kuyindlela enhle kakhulu ukusebenzisa izinsalela mohair ezinemibala. Ukwaluka scarves kusukela mohair - ukudala onobuhle efudumele futhi usongene, futhi izimbali ezincane crocheted eyenziwe mohair ntambo etholwe iyisizwe esivelele kakhulu futhi okukhulu kakhulu. Ukuze ijezi imbali eyodwa wenze uchungechunge yaseZimbabwe ezintathu, kuba okungavaleka e indandatho futhi ahlanganiswe ilandelana imigoqo 6 ngaphandle nakida nge Lesisemkhatsini emoyeni iluphu. Umugqa olandelayo provyazyvaem ezimbili iluphu emoyeni ikholomu aluhlaza 3 amakholomu kanye ikholomu ngaphandle sc sc umugqa wangaphambilini, ezimbili emoyeni iluphu stobik ngaphandle nakida ngaphansi emoyeni iluphu lomugqa langaphambilini, nokunye kuze kube sekupheleni. imibala Ready sihlanganise nomunye ngokuvumelana ubude ububanzi isikhafu.
3. ngendlela ethakazelisa kakhulu ukwakha isikhafu kusukela ntambo izinsalela ngesimo neketanga. Imodeli yokuqala isikhafu bayojabulela impumelelo Amazing nabanye futhi ngeke kuhlobisa ingubo phezulu futhi isudi, pullover ethafeni ngisho ukukhanya ihembe-shirt. Ukwaluka scarves ukukhilosha ngendlela efanayo kakhulu kalula futhi ngokushesha. Okokuqala obumbene iringi kuqala. Ngenxa yale njongo intambo sasibalwa phandle, alo-ke ngesigamu, futhi esonta ngentambo indandatho ububanzi of mayelana 10 cm. Ngaphandle kokuthatha intambo kukhoyili, iringi okuholela sibopha amakholomu ngaphandle kakhulu nakida eduze komunye nomunye. Ngakusasa uchungechunge ezimbili futhi obumbene amakholomu ngaphandle sc. Kufanele kuqashelwe ukuze iringi uyisicaba, salokhu njengoba kudingekile ukuze ungeze kwababusi amakholomu. I ring yesibili futhi obumbene, kodwa ngentambo ngaphambi eduze iringi, udabula imbobo esiyingini kuqala, futhi eyesibili indandatho ukuluka kakade ifakwe kuqala. Ngakho, siyaphinda nobude oyifunayo ukunitha isikhafu. Inhlanganisela umbala izindandatho zingase zishintshe kakhulu, kodwa-ke, ukuze ugweme umbala dissonance. Uma ufuna ukuxhuma isikhafu ebanzi, uthi, ringlet ezimbili noma ezintathu ububanzi, indandatho ngamunye emgqeni wesibili nowesithathu, isivele kudingekile ukuba adabule omunye hlangothi nomunye indandatho aphansi.
Zonke izindlela ezichazwe ntambo Fluffy elikhanyayo imibala ukhombise impilo kalula tie isikhafu ngoba umntwana. Isikhafu Ukwaluka izingane ukukhilosha - kungcono futhi uhlobo bezijabulisa kakhulu amathuba. Ngemva uyalisebenzisa yini leli thuluzi, ungakwazi ukukhilosha ukudala izimbali hhayi kuphela egqamile, kodwa futhi funny kancane ubuso isilwane, ezahlukene imivimbo anemibala, imibuthano nasezigcawini.
Ekilasini ahlula: ballerina wire futhi usula
Ihhotela Osborne Holiday Resort 2 * (India, North Goa): ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi